Ọnụego | January 2022
Ngwa ahụ enweghị ike ibido (0xc000007b) windo 10
Inweta ngwa enweghi ike ibido nke ọma (0xc000007b) 0xc0000005, 0xc0150002, 0xc0000022, 0xc0000018 ma ọ bụ 0xc0000142 ka ha na emepe ngwa ma ọ bụ Egwuregwu na Windows 10. Ihe na-akpatakarị okwu a bụ enweghị nkwekọrịta n’etiti ngwa 32-bit na 64- bit gị usoro. Lee otu esi edozi ya
Inweta Display ọkwọ ụgbọala kwụsịrị ịzaghachi ma gbakee, PC gị nwere ike nwa oge kpọgidere ma bụrụ onye na-anabataghị. Nsogbu a na - aputa mgbe ihe Nchọpụta oge na Iweghachite (TDR) na - achọpụta na eserese eserese azabeghị n’ime oge enyere, iji dozie nke a na - abawanye oge TDR na nchịkọta ndebanye aha.
7 ụzọ idozi windo 10 nwa ihuenyo na cursor mgbe nbanye 2021
windo 10 nwa ihuenyo na cursor mgbe nbanye ma ọ bụ tupu nbanye, Windows 10 Pc rapaara na nwa ihuenyo na blinking cursor tumadi na-akpata n'ihi Display Driver nke ((na-ekwekọghị na nke ugbu a windo version, rụrụ arụ, nke ochie). ọnọdụ na Reinstall the Display / Graphics Driver
Njehie 0x803F8001 Paint 3D dị ugbu a adịghị na Windows 10
mgbe ị na-achọ imeghe Agba 3D, ọ na-agbapụta njehie na-asị 'Lelee akaụntụ gị. Paint 3D adịghị ugbu a na akaụntụ gị. ma nye mperi koodu 0x803F8001. Isi ihe kpatara njehie a bụ ịmekọrịta esemokwu n'etiti akaụntụ Microsoft na ngwaọrụ gị. nanị tinyegharịa akaụntụ gị ma lelee nsogbu ahụ edozi
Sistemu na abịakọrọ ebe nchekwa Akwa diski ojiji na windo 10
Notice hụrụ 100% Disk Usage site na sistemụ na Memory abịakọrọ ma n’ihi Windows 10 Sistem a na - anabataghị? Idozi sistemụ na abịakọrọ ebe nchekwa nnukwu diski ojiji, 100% CPU ojiji Tweak paging file size niile draịva azụ akpaka, Gbanyụọ System na abịakọrọ Memory si ọrụ scheduler
Edozi Windows enweghị ike ịchọta mbipụta ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị ekwesị
Lee, anyị edepụtara ụzọ abụọ enyere ndị ọrụ ndị ọzọ aka idozi Windows enweghị ike ịchọta nsogbu ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị ekwesị na windo 10, 8.1 na 7.
Notice hụrụ 100% Disk Usage by System and Compress Memory na maka Windows 10 Sistem a ghọrọ onye na-anaghị anabata ozi ya? Idozi sistemụ na abịakọrọ ebe nchekwa nnukwu diski ojiji, 100% CPU ojiji Tweak paging file size niile draịva azụ akpaka, Gbanyụọ System na abịakọrọ Memory si ọrụ scheduler
Windows 10 Abalị Ìhè Na-adịghị Arụ Ọrụ mgbe Mmelite? Lee otu esi edozi ya
enweghị ike ịgbanwuo Njirimara Ìhè n'abalị dịka a na-achagharị ya na ntọala ngosi, Ebe a ihe ngwọta ngwa ngwa Idozi Nhọrọ Nhọrọ Abalị na-agbapụ na Windows 10
3 Ngwọta iji dozie 'Nrụrụ Disk ahụ emebiwo ma ghara ịgụ ya' na Windows
Ọnọdụ adịghị, Disk Ọdịdị na-emerụ na unreadable, pụtara na draịvụ ike gị ma ọ bụ USB ngwaọrụ rụrụ arụ, nwere ihe unreadable disk Ọdịdị.
Olee idozi internet njikọ nsogbu na windows 10 (9 solutions ka idozi)
Windows 10 internet anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ WiFi Jikọrọ Ma Ọ dịghị ohere orntanetị ma ọ bụ laptọọpụ na-efukarị njikọ internetntanetị? Lee otu esi edozi nsogbu ahụ
windo 10 Laptọọpụ na-agba ọsọ ngwa mgbe melite? Lee otu esi eme ya ngwa ngwa
Windows 10 na-agba nwayọ nwayọ? Na-achọ ịkwalite windo windo 10 iji mee windo 10 ọsọ ọsọ? Nke mbụ nyocha maka nje, ọrịa malware, Uninstall Unescesses Applications, Disable Startup programs, Background Running apps, Visual Effects & Animations, Nịm High-Performance Power Plan, Na-ebuli Virtual Memory wdg
Kedu ihe bụ Windows.OLD na otu esi ehichapụ folda na windo 10 1903
Ọ bụrụ na ị nwee obi ụtọ Na windo dị ugbu a kwalite Version 1903, Mgbe ahụ You Nwere Ike Dehichapụ Windows.old nchekwa na iji Disk Cleanup Tool To Free up some Disk Space
Anyị enweghị ike ịchọta akara mperi igwefoto gị 0xa00f4244 (0xC00DABE0)
Inweta njehie anyị enweghị ike ịchọta koodu njehie igwefoto gị 0xa00f4244 (0xC00DABE0) ma ọ bụ 0xa00f4244 (0xc00d36d5) njehie a nwere ike bụrụ ngwanrọ antivirus na - egbochi kamera ma ọ bụ igwefoto ahụ. Ma ọ bụ ọ ga-abụ webcam ọkwọ ụgbọala nke. Naanị gbanyụọ sọftụwia nchekwa, Reinstall onye na-anya kamera webata Gbaa mbọ hụ na a na-ahapụ ngwa iji igwefoto kọmputa
Ngwọta 5 na - arụ ọrụ iji dozie njehie Err_connection_reset na Chrome
Err_connection_reset na-apụtakarị mgbe ebe nrụọrụ weebụ ị na-achọ ịga na-enweghị ike ịme njikọ na saịtị ahụ. ebe a ka esi edozi ya
Nsogbu jecthapụ USB Mass Nchekwa Ngwaọrụ a na-eji ugbu a
Inweta Nsogbu Nsogbu jectgbanye USB Mass Nchekwa Ngwaọrụ 'Ngwaọrụ a ka eji ugbu a' Ka ị na - achọ iji wepu eriri USB. njehie a pụtara na ngwaọrụ USB ị na-achọ ịchụpụ ka ejizi. Na iji kpuchido data gị na ngwaọrụ gị, sistemụ ahụ na-akwụsị ịpụpụ ya. Lee otu esi edozi nke a
Idozi windo 10 Enweghi ike ịnweta ngwaọrụ buut BSOD, Bug Check 0x7B
Inweta keobere ngwaọrụ BSOD njehie na mmalite? N'ihi nke a Blue Screen Error Windows ugboro ugboro malitegharia na ada ada na-amalite kwesịrị? Na mkpokọta, njehie a (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) Nnyocha Bug 0x0000007B na-egosi na OS enwekwaghị ohere ịnweta data sistemụ ma ọ bụ nkewa buut n'oge mmalite.
Ihe ohuru 15 na windo 10 Eprel 2018 melite Version 1803
windo 10 Eprel 2018 melite v1803 dị njikere iwepụta ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, dị ka usoro iheomume, nkekọrịta dị nso, mgbado anya na-enyere aka, nhọrọ mgbake okwuntughe maka akaụntụ mpaghara, Ndenye Bluetooth ọsọ ọsọ na mmụba ndị ọzọ na Microsoft Edge, Ntọala Nzuzo, Akwụkwọ Ndetu Cortana. , Ngwa Ntọala, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Edozi: “Njikọ gị abụghị nke onwe” Mperi na Google Chrome
ma ọ bụrụ na ị na-enweta njehie Chrome njikọ gị abụghị net net :: err_cert_common_name_ ezighi ezi Changebọchị na oge na mpaghara na ndabara iji nyere aka
[Idozi] Apps efu Mgbe na-adịbeghị anya Windows 10 nweta nkwalite
Mgbe ị wụnye Windows 10 Fall Creators Imelite ụfọdụ ngwa na-efu na Start Menu na ụfọdụ ngwaọrụ. A hapụkwaghị ngwa ndị na-efu efu na Start Menu, ma ọ bụ na ha dị na ndepụta nke ngwa. Searchingchọta ngwa Cortana na efu efu enweghị ike ịchọta ya wee tụọ m aka na Storelọ Ahịa iji wụnye ya. Mana Storelọ ahịa ahụ kwuru na etinyere ngwa ahụ.